Boliiska Soomaaliya oo qabtay dad - BBC News Somali
Boliiska Soomaaliya oo qabtay dad
17 Agoosto 2015
Ciidamada booliska ee Soomaaliya, ayaa hawgal ay ka fuliyeen magaalada caasimada ah ee Muqdisho waxa ay ku sheegeen in ay ku qabteen walxaha qarxa iyo ragii diyaarinayay guri ku yaala degmada Yaaqshiid.
Koox ka tirsan booliska sida gaarka ah u tababaran oo wata eeyaha wax uriya, ayaa xalay saqdii dhexe u dhacay gurigan laga helay waxyaabaha qarxa iyagoo soo xiray kow iyo toban qof oo la tuhmayo.
Taliye kuxigeenka booliska Soomaaliya Janaraal Mukhtaar Afrax ayaa BBC-da u sheegay, inay in mudo ahba daba socdeen guriga la helay iyo dadka lagu soo qabtay isagoo ku sheegay tirada dadka lagu soo xiray hawlgalkan kow iyo toban qof.
Taliye Afrax, ayaa sheegay in seddex kamid ah dadka la soo xiray ay faraha kula jireen diyaarinta waxayaabaha qarxa isagoo sagaalka kale sheegay in lagu tuhmay.
Kooxda islaamiga ah ee Al-shabaab ayaa magaalada caasimada ah ee muqdisho ka fulinysay weeraro u badan is qarxin tan iyo 2011kii, markaasoo xoogaga Midowga Afrika oo taageeraya kuwa dawladda ay si buuxda gacanta ugu dhigeen magaalada Muqdisho.